It is the responsibility of the member to notify TopSlotSite immediately ofalost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; ချက်ချင်းထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းကြားစာများကိုအဖွဲ့ဝင်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်တစ်ဦးပျက်ကွက်များမှမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဖွဲ့ဝင်အားဖြင့်တစ်ခုတည်းကိုသာဘွားမြင်လိမ့်မည်, နှင့် TopSlotSite ဆိုဒီလိုဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
နိမ့်ဆုံး Withdrawal တန်ဖိုးများ
အကောင့်နှုန်းအမြင့်ဆုံးဆုတ်ခွာငွေပမာဏသည် (ကိုယ့်) $3,000 / €3,000 / £3,000 / 30,000တစ်ပတ်ကို Kr, and (ii) $6,000 / €6,000 / £6,000 / 60,000တစ်လလျှင် Kr, except in the case of progressive jackpot winnings, where the maximum withdrawal amount per month is $30,000 / €30,000 / £30,000 / 300,000Kr. TopSlotSite may, သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာ, သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအဖွဲ့ဝင်များသည်ဤကန့်သတ်တိုးမြှင့်.
အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုမှအဖွဲ့ဝင်များကကာကွယ်နိုင်ဖို့တစ်တိုင်းတာအဖြစ်, TopSlotSite တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးဆုတ်ခွာ processing တို့ရှေ့မှာဝိသေသလက္ခဏာစိစစ်အတည်ပြုလိုအပ်နိုင်ပါသည်. အသင်းဝင်များသည်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုပြသရန်တောင်းဆိုစေခြင်းငှါ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမဟုတ်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ) TopSlotSite မှ:
တစ်ဦး TopSlotSite အကောင့်ရန်ပုံငွေဖို့အသုံးပြု credit / debit card ကို: တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ကဒ်နှစ်ဖက်စလုံး၏ရှင်းလင်းပြသားသောမိတ္တူလိုအပ်ပါသည်. လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
လိပ်စာ၏သက်သေပြ: This can come in the form ofarecent utility bill or credit card statement that shows the member's full name and address as listed in his/her TopSlotSite account. ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပြန်ချက်များအဘို့, ကတ်နှင့်ကတ်၏နောက်ကျောအပေါ်သုံးဂဏန်း code တွေရဲ့မျက်နှာစာပေါ်အလယ်ရှစ်ဂဏန်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ထွက်သည်ကိုကူးရမယ်.
ဓာတ်ပုံ ID ကို: အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်ယူ process ရန်အဘို့အမကြာသေးမီကဓာတ်ပုံပြပွဲဖော်ထုတ်စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ပါသည်. အဆိုပါ ID ကိုခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ဦးမိတ္တူရှိနိုင်ပါသည်, driver's license or national ID card. The member's name, ဓာတ်ပုံနှင့်လက်မှတ် TopSlotSite မှပေးပို့သောမိတ္တူအပေါ်ပေါ်လာရကြမည်. အချို့ကိစ္စများတွင်, အဖွဲ့ဝင်တရားဝင်မှု၏အထောက်အထားအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောသက်သေခံရှေ့နေသို့မဟုတ်ရှေ့နေများကသူတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ထုတိုဟုမေးစေခြင်းငှါ.
အားလုံးထွက်ငွေသားတောင်းဆိုမှုများအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးခြင်းကိုခံရ ကျေးဇူးပြု. "လာမည့်" ဘို့3စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး, သင့်အနေဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း.
Without derogating from any other provision in this withdrawal policy, မဆိုထုတ်ယူလုပ်ငန်းများ၌ခင်, သင့်ရဲ့ကစားမဆိုမမှန်ကစားပုံစံများများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်. Should the Company deem that irregular game play has occurred, ကုမ္ပဏီမဆိုထုတ်ယူမပြောဘဲရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သိမ်းယူနှင့် / သို့မဟုတ်သိမ်းယူသင့်အကောင့်ရဲ့ချိန်ခွင်လျှာနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုပိတ်ဖို့.